हामी किन वकील को एक शक्ति चाहिन्छ, मलाई लाग्छ, लगभग हरेक वयस्क थाह छ। यो वृत्तचित्र काम गर्न सम्बन्धित अन्य कार्यहरू पूरा गर्न विभिन्न संगठन को प्रतिनिधि हुन सही, उदाहरणका लागि, परिवहन व्यवस्थापन, पुष्टि कागजात छ। अर्को शब्दमा, एक व्यक्ति जो कारण हो छैन, जो, धाउन सक्षम एक प्रतिनिधि हुन।
Q: छ वकील वैधता शक्ति आफ्नो उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ? शायद छैन। वकील को एक शक्ति र यसको गणना को शुरुवात सर्तहरू बुझाउँछ जो व्यापक जानकारी प्रदान गर्न को लागि कानून।
लेख 186 रूसी संघ को नागरिक कोड को को वारंट अधिकतम अवधि 36 महिना छ भनी उल्लेख। यो काउन्टडाउन यो अवधि प्रोक्सी बयान दिन सुरु हुन्छ। यदि वकील को शक्ति समाप्त हुँदैन, त्यो हो, यो निर्दिष्ट गरिएको छैन, त्यसपछि यो मान्य मात्र एक वर्ष को लागि हो, र यदि समस्या को मिति तोकिएको छैन, वकील यस्तो शक्ति कुनै पनि जग बिना साधारण छैन।
कागजात एक दिन मा, उदाहरणका लागि, हुन सक्छ, र एक वा बढी महिना मा कार्य गर्नेछ। यसलाई व्याख्या छ? रूपमा त्यहाँ एक व्यक्ति आफ्नो काम को प्रकृति मा छ भन्ने तथ्यलाई सधैं एउटै ठाउँमा छैन हुन सक्छ, र त यो आफ्नो कार्य को अवधि एक महिना आउने proviso संग वकील को एक शक्ति छ। अनुमति - यस्तो कानून परिस्थिति सकारात्मक मूल्यांकन, कि छ छ। त्यसैले वकील को शक्ति को अवधि छैन यसको तयारी को मिति देखि गणना गरिनेछ, र कागजातमा निर्दिष्ट गरिएको छ कि नम्बर। वकील को शक्ति को शुरुवात यसको तयारी को मिति संग एकै समयमा पर्नु गर्दैन भने, कि छ, सहमत मिति अघि, यो उल्लङ्घनको छलफल गरिनेछ।
तीन वर्ष मा रद्द गर्न वकील को शक्ति को वैधता अधिकतम अवधि कि नागरिक अधिकार रूस द्वारा उठाएको मुद्दा को कोड। यो निर्णय गर्ने नागरिक परिसंचरण सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। पहिलो, वकील को शक्ति को लागत कम, तिनीहरू दस वर्ष विभिन्न अवधि लागि जारी गर्न सकिन्छ। दोस्रो, वकील को शक्ति सुरक्षा कारण तीन वर्ष अधिकतम लागि सक्दछन्। कि प्रमुख प्रतिनिधि हतार र अनुचित कार्य गर्न सकेन, छ। तर 36 महिना, यो पनि एक एकदम ठूलो अवधि हो। यो समयमा, तपाईं बकवास अयोग्य कदम को धेरै पकड गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, वकील को शक्ति को वैधता सुरक्षित वृद्धि गर्न सकिन्छ। सबै लाभ उठाउन। मुख्य र, र आफ्नो प्रतिनिधि, र नोटरी सार्वजनिक सेवाहरू।
वकील को शक्ति धेरै प्रकार को हुन सक्छ। वकील को सरल शक्ति, उदाहरणका लागि, परिवहन र केवल व्यवस्थापन गर्न। यो नोटरी कार्यालय मा अपेक्षित रूपमा, प्रमाणित गर्नेछ हुन, तर गर्न विपरीत मा वकील को सामान्य शक्ति केही अधिकार छ। एक व्यक्ति एक कागजात यस्तो भइरहेको परिवहन केही समय गर्न, तर यसमा सवारी केही छ।
अधिवक्ता को सामान्य पावर - एक गम्भीर कागजात। , कार को निपटान गर्न subcontract र बेच्न लाइसेन्स घटक र सम्मेलन परिवर्तन, निरीक्षण वाहन पारित,: यस्तो कागजात भएको नागरिक निम्न कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तीन वर्ष को वकील अनुमानित अधिकतम को अवधि शक्ति पनि छ।
तथापि, त्यस्तो कागजातमा हातले, वाहन को मुख्य मालिक मालिक हुन मानिन्छ। दुर्घटना को मामला मा सबै कागजात आफ्नो ठेगाना पठाइयो।
बिक्री वा हतारमा एक कार खरीद र लाम अंक दर्ता परिवहन खडा र निकटतम नोटरी जाने र वकील को शक्ति discharged गर्न चाहँदैनन् धेरै। एक चाँडै र सजिलै हात मा, अर्कोतर्फ मा, defaulting खरीदार भने, छिट्टै वाहन कर लागि रसिद, र संभवतः अन्य पेनाल्टी प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
यो दर्ता संग वकील को शक्ति को वैधता एक लामो समय को लागि मिसिन प्रयोग गर्न आफ्नो खरीदार छैन परीक्षा हुन गर्न 1-3 महिना राम्रो छ संकेत गर्छ।
कला। 21 रूसी संघ को परिवार कोड को टिप्पणी संग
गैर-आवासीय परिसर अनुवाद
सरल शब्दमा व्यक्तिगत डाटा भण्डारण मा व्यवस्था। रूस मा व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा
Teleconference - यो के हो? को teleconference को संगठन
Baidar उपत्यका। क्रिमीआ को सबै भन्दा ठूलो आरक्षित
यो किसान-मूल: प्रयोग र उपयोगी गुण, समीक्षा
संसारको एक नागरिक को पासपोर्ट - यो के हो
100 वर्ग मीटर को सही डिजाइन-मंजिल्ला घर कसरी चयन गर्न। एम
क्रिस्टल रोग: कारण, फोटो, जीवन
भारत: रिपब्लिक को ठाँउहरु। भारत: रोचक तथ्यहरू